Maamulka deegaanka dhabbad ee gobolka Galguduud oo ka hadlay saamaynta dhawaan ka dhacay deegaanka. – Radio Daljir
Janaayo 20, 2013 8:52 b 0
Caabud-waaq, Jan 20- Gudoomiye ku xigeenka dagmada dhabbad ahna kusimaha gudoomiyaha dagmadaasi ee maamulka ahlusuna waljameeca Maxamed Daahir Gaduud oo waraysi siiyay radio daljir ayaa ka waramay koox dablay hubaysan oo dhawaan nin ku dilay deegaanka Xanan-waylood oo ku dhaw xadka Soomaaliya iyo Itoobiya.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa tilmaamay in ka maamul ahaan iyo hadii ay yihiin wax garadka deegaankuba ay kaxunyihiin falkaasi dilkaa isla markaana ay tahay wax aysan u dhamayn dadka deegaanka oo caqli xumaa.
Dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in ay kudaba joogaan ragii gaystay falkaasi ayagoo kaashanaya maamulada gobolka.
Waxaa deegaanada Soomaalida gaar ahaan dhinaca miyiga ku badan dilalka daba jooga aanooyinka iyo aar-gudashada qabiilka, waxaana taasi inta badan ay keentaa isku dhac beelaha dhexdooda oo marka danbe isu badala dagaal dad iyo duunyo lagu waayo.